Yusuf Garaad: Sahra Axmed Barakadeedii
Xilli aad u adag ayay howl adag oo samafal ah ka qeyb qaadatay, waxaana ka soo gaartay dhibaato.
Waxay ahayd markii dagaalkii 1988 dartiis ay Hargeysa iyo Burco ka qaxeen dadkii degganaa, laakiin ay ayadu goosatay in ay gacan ka geysato gargaarka inta magaalada ku hartay iyo dadka tuulooyinka deggan.
Waxay la shaqeysay Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed oo isagana ay wada shaqeynayeen Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas.
Oktoobar 1990 iyada oo oo joogta Darar Weyne oo Hargeysa aan ka fogeyn ayaa gaariga ay la socotay oo ICRC ay lahayd uu xumaaday.
Iyada iyo qaar ICRC ahi waxay hore u sii raaceen baabuur uu leeyahay Booliisku. Weerar ay SNM ku soo qadday gaariga ayuu ku dhintay Peter oo ka tirsanaa ICRC, waxaana wadajir loo afduubay Sahra iyo Antonella Notari oo u dhalatay Switzerland.
Sahra iyo Antonella waxaa lagu hayay hal goob.
Markii Antonella la sii daayay 1990 ayaa labada isugu dambeysay ilaa dhowr iyo toban sano ka dib aan labadoodaba ku casumay xafiiskeygii London.
Sahra iyo Antonella waa isku burureen.
Waxay ahayd kulan ay xusuusteen murugo xanuun badan. Haddana wuxuu ahaa kulan uu is araggoodu farxad geliyay.
Halkaas ayaan saddexdeenna iyo qaar kale oo aan casuumay oo ay fannaaniin Waaberi ahi ay ka mid ahaayeen aan ku wada qadeynay.
Mar kale ayaan aniga iyo Antonella ku soo booqannay Sahra guriga ay London ka degganeyd, halkaas oo iyada iyo fannaaniin kale aan wakhti dheer kula sheekeysannay.
Maanta ayaan Antonella ku wargeliyay geerida Sahra Axmed. Aad ayay uga murugootay geerida Sahra. Iyada oo Sahra u murugoonaysa, Antonella waxay tiri:
Sahra Ahmed Jama waxaan ku xusuustaa sidii ay ii qaboojisay markii aan ka warhelay in Peter oo aan wada shaqeyneynay uu dhintay. Waan kala daatay. Labadeennuba waxaan joognay xarun ciidan oo SNM ay ku lahayd lama degaanka ku yaalla Somaliland. Gacanta ayay i qabatay markaas ayay i geysay geedo gadaashood. Sida carruur ayay iigu qubeysay.
Isku af kumaynaan hadal. Laakiin waxaan isu fahamnay sida gabdho walaalo ah. Waxay ahayd qof aad geesi u ah, oo ay ka go’an tahay in ay dadkeeda u gargaarto. Qalbi furan oo gacanqabasho wata ayay kula dhaqmaysay qof kasta, kuwaas oo aan ka mid ahayn annaga oo ka soconna ICRC.
Weligeey ma illoobi doono. Barakadeedii ayaa weli igu jirta. Aniguna waxaan ducadeyda u dirayaa qoyskeeda. Waxaan u rajeynayaa in ay nabad ku noolaadaan.
Bisha Cas ka hor, Sahra Axmed, waxay ka mid ahayd fannaaniinta loogu jecel yahay Hobollada Waaberi. Sidaa darteed waa fannaanad magac dheer oo Soomaali badankeed ay taqaan.
Walaalkeey ayay Sahra ahayd fannaanadda uu dhegeysigeeda ugu jecel yahay. Labadaba Allah ha u naxariisto.
Allah ha u naxariisto. Jannada Allah ha ka waraabiyo. Inta jecelna Samir iyo Iimaan Allah ha ka siiyo.
Posted by Yusuf Garaad at 12:51:00